चन्द्र ढकालको अमलाचौरदेखि व्यावसायिक नेतृत्वसम्मको यात्रा – Nepal Japan
नेपाली समय : 06:20:02
जापानी समय : 09:35:02
29 November, 2020 19:23 | कर्पोरेट/पर्यटन | comments | 28950 Views
भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो । रातिदेखिकै रौनक थियो नेपाल उद्योग वाणिज्यम महासंघको निर्वाचनको । बिहानको ४ः५० बजे निर्वाचन समितिले घोषणा गर्यो– ‘महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा व्यवसायी चन्दप्रसाद ढकाल विजयी हुनुभएको छ ।
लामो दौडको घोडा जस्तै, अनेकन हण्डर र ठक्कर खाएर सफलताको उचाइमा पुग्नुभएका व्यवसायी ढकालका लागि आजको जीत सफलताको उचाइको अर्काे एउटा खुड्किलो बनेर खडा भयो । अनि हरेक बिहानीपख नयाँ आशाहरुको खोजीमा हिँड्ने मानिसजस्तै उहाँको यो बिहानीको जितले पनि नेपालको उद्योग, व्यवसायका क्षेत्रमा नयाँ आशाहरुको सञ्चार गर्नसक्ने आशा जन्मायो ।
एउटा सानो पसलबाट उठेर नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउन सक्ने व्यक्तिका रुपमा ढकाल अहिले पनि आम नेपालीका लागिसमेत प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ । त्यसैले नेपाली उद्यमशीलताका क्षेत्रमा यो नाम नयाँ होइन । बाग्लुङको अमलाचौरबाट राजधानी छिरेका ढकालले यो हदसम्मको सफलता हात लाग्नसक्ने हुनका लागि उहाँले भोगेका र व्यहोरेको सङ्घर्षका कथा भने त्यति सजिला छैनन्, निकै मर्मस्पर्शी छन् । देशको उद्यमशीलताका क्षेत्रका हरेक व्यक्ति उहाँका सङ्घर्षका कथाहरु पढेकै हुनुपर्छ ।
ढकालको उद्यमशीलताको यात्रा धेरै पुरानो छैन, करिब साढे दुई दशकको मात्र हो । छोटो समयमा देशको उद्यम, व्यवसायमा प्राप्त भएको यो सफलताको रहस्य के हो ? उहाँको विगत जान्नेहरुले नै र पछिल्ला केही वर्षहरुमा देशका सञ्चारमाध्यमहरुले सोध्ने प्रश्न हो यो । उहाँको सदैव स्वाभाविक उत्तर रहने गर्छ– लगाव, इमान्दारिता र परिश्रम । ढकाल स्वीकार्नुहुन्छ– मेरो सफलताको सबैभन्दा दरिलो टेको भनेको लगाव र परिश्रम नै हो ।
नेपालको व्यवसायमा बहुआयामिक क्षेत्र समेट्दै अघि बढेका उहाँ सबैलाई परिश्रम नै गर्न सिकाउनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ– संसारको अरु भूगोलका तुलनामा हाम्रो माटो धेरै बढी मलिलो छ । यहाँ जे रोपे पनि सुन फल्छ, तर यसले मेहनेतको अपेक्षा भने गर्छ । मत भन्छु, हामी आफँै माटो रोपेर सुन फलाउन सक्छौँ, अन्त कतै भौँतारिनु पर्दैन । हो, यस्तै सफलता र मेहनतले ढकाल अब एक उद्यमी मात्र होइन कि निजी क्षेत्रलाई उद्यममैत्री नीति निर्माणका लागि देशको समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा र छाता संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । “आफूले यस देशमा एउटा सानो पसलदेखि ठूला कर्पाेरेट हाउसम्मको नेतृत्व गरेकाले देशका सानादेखि मझौला हुँदै ठूला व्यवसायका समस्या र आवश्यकताको बारेमा म अरुभन्दा बढी नै जानकार छु जस्तो लाग्छ अब मैले यीनै समस्याहरुको पैरवी गर्ने हो, मुलुकको समृद्धिको लागि राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई बढावा दिने हो– आइतबार बिहान संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो ।”
केही समयअघि ढकालले भन्नुभएको थियो “मानिसलाई कतिपय अवस्थामा नसोचिएको सफलता पनि हात लाग्छ अथवा केही नसोचिएका कुराहरु पनि हुन सक्छन् । तर पनि ती सबै नराम्रा पनि त हुँदैनन् ! जे हुन्छ राम्रै हुन्छ ।” तर उहाँको अहिलेको यो सफलता भन्दा वास्तविक पारिवारिक जीवन निकै पर थियो । तर आज बिहान भने त्यो सबै स्मरण गर्ने फुर्सद उहाँसँग थिएन ।
“यही समस्याको हलका लागि हामीले हाम्रो अनुभवलाई टेकेर ‘इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेश’ (आइएमई) खोल्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकसँग गर्यौँ, जुन सफल पनि भयो । त्यही आइएमई अहिले नेपालको ‘मनी ट्रान्सफर’ को पर्यायबाची हो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले मानिस पैसा पठाउन कुनै बैंकमा या अन्य मनी ट्रान्सफर कम्पनीमा पुगेका भए पनि ‘आइएमई गरिदिनुस्’ भन्ने गरेको सुनिन्छ, सफलता भनेका यस्तै यस्तै काम त होलान्, जे होस यो पनि मुलुकका लागि केही गर्यौँ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव छ ।”
आइएमई स्थापना गर्दा हामी यो अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने चाहीँ लागेको थिएन, उहाँको अनुभव छ । शुरुआती दिनहरुमा हामीले आइएमई खोलेका छौँ, तपाइहरुको रकम सुरक्षित रुपमा घरपरिवारसम्म पु¥याइदिन्छौँ भन्दा मानिसहरु पत्याउन पनि तयार भएनन् । तर हाम्रो इमान्दारिताले विस्तारै हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो । हाल आइएमई नेपालको विप्रेषण क्षेत्रको पर्याय मात्र होइन नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको एक उदीयमान ग्रुप पनि हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷ ७७ मा नेपाल भित्रिएको झण्डै रु नौ खर्ब विप्रेषण मध्येको ठूलो हिस्सा आइएमईमार्फत् नै आएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले प्राप्त गरेको सफलताबाट अरुलाई प्रेरणा पनि प्राप्त हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बढेकाले अझै ठूलो मात्रामा मुलुकमा व्यवसायको विकासका लागि ढकालले वातावरण निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा यतिखेर देशका समग्र व्यवसायीको छ । हरेक बिहानीले नयाँ आशा बोकेर आएजस्तै बिहान सबेरै उदाएका चन्द्रको आगामी यात्राले पनि नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा समृद्धिको ढोका खोल्नसक्ने नयाँ आशाको सञ्चार गर्न सकोस् ।